Dị ka ihe atụ, Pọl onyeozi dere, sị: “Anyị na-achọ ka anyị na-eme ihe n’eziokwu n’ihe niile.” (Ndị Hibru 13:18) Jụọ onwe gị ma ị̀ na-agwa papa gị na mama gị eziokwu mgbe ị na-agwa ha ebe ị chọrọ ịga na ihe ị chọrọ ime.
“O nwere mgbe m na-ezigara otu nwa okorobịa m hụrụ n’anya ozi iimel na nzuzo. Papa m na mama m mechara chọpụta ma sị m kwụsị ya. Agwara m ha na m ga-akwụsị ya, ma akwụsịghị m. M nọ na-ezigara ya ozi ruo otu afọ. Ọ na-abụ m zigara nwa okorobịa ahụ ozi iimel, papa m na mama m chọpụta, mụ arịọ ha ma gwa ha na agaghị m eme ya ọzọ. E mechaakwa, mụ emee ya ọzọ. O nwere ebe o ruru, ha anaghịzi ekweta ihe ọ bụla m gwara ha!”
““O nwere mgbe papa m na mama m na-anaghị ekweta na m naghị achụ nwoke. Ma, aghọtala m ihe kpatara ya. N’oge ahụ, mụ na ụmụ nwoke abụọ ndị ji afọ abụọ tọọ m na-eme enyi. Mụ na ha na-ekwu okwu ọtụtụ awa n’ekwentị. Anyị gaa oriri na nkwari, ọ na-abụkarị naanị mụ na ha na-akpa nkata. Ndị mụrụ m naara m ekwentị m ma jide ya ruo otu ọnwa. Ha ekweghịkwa m gaa ebe ọ bụla mụ na ụmụ okorobịa ahụ ga-ahụ.”
Ihe nke abụọ ị ga-eme bụ ikpebisi ike na ị ga na-eme nke ọma n’ebe ndị ahụ ị na-anaghị eme nke ọma. Mee ihe a Baịbụl kwuru: ‘Yipụ mmadụ ochie ahụ, nke kwekọrọ n’ụzọ i si eme omume n’oge gara aga.’ (Ndị Efesọs 4:22) Ka oge na-aga, papa gị na mama gị na ndị ọzọ ga-achọpụta na ịna-emezi nke ọma.—1 Timoti 4:15.